Zụọnụ ego Archives | Save A Train
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Europe nwere ike kọwara dị ka otu n'ime ndị kasị sie njem nleta na-adọrọ mmasị na nke a ụwa na ọ na-emekarị kwuru na i nwere ike na-akpagharị gburugburu na-enwe njem gị na a ọnụ ala ọnụego e. Nkwupụta ahụ bụ eziokwu dịka ugbu a ị nwere ike ịchekwa ego gị…
Oge Ọgụgụ: 12 nkeji N'oge na-adịbeghị anya anyị dere blog na ịnya anyị na ụmụaka na ụgbọ oloko ma nye gị ụfọdụ ndụmọdụ maka ịnwe obi ụtọ ụmụ gị. ịgụ akwụkwọ, na-egwu Uno, na-ege ntị audiobooks bụ maa a kwesịrị ka onye ọ bụla, mana enwere ọtụtụ ngwa ibudata tupu…
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Ejegharị ụgbọ okporo ígwè pụrụ ịbụ otu n'ime ndị kasị izuike na-atọ ụtọ ụzọ na-gburugburu. Mkpa ka ị mara otú ka ihe kasị mma nke gị na njem na-smart. Bụ onye a haziri nke ọma na ịmara ihe na-aga ogologo oge ịme…